Ny EBooks dia handoa ny VAT mitovy any Espana amin'ny boky amin'ny endrika taratasy | Ireo mpamaky rehetra
Ny EBooks dia handoa ny VAT mitovy any Espana amin'ireo boky amin'ny endrika taratasy
Nandritra ny fotoana lava tany Espana, ny fanabeazana boky na boky nomerika dia navahana am-pahamatorana raha oharina amin'ny boky amin'ny endrika taratasy, satria nampandoavina hetra 21% izy ireo, tsy mitovy amin'ny 4% anaovana hetra ny boky nentin-drazana. Na izany aza amin'ny ora farany Luis de Guindos, ny minisitry ny toekarena, ny governemanta Mariano Rajoy, dia nanambara fa nifarana io tsy fitoviana io.
Tamin'ny voalohan'ny volana desambra ny komisiona eropeana, tsy te-hiova na oviana na oviana amin'ity olana ity, dia nanaiky fanovana ka Ireo firenena mpikambana ao amin'ny Vondrona eropeana dia afaka mampihatra tahan'ny VAT mihena na mihena be amin'ny boky amin'ny endrika nomerika. Nanokatra varavarana ho an'i Espana hanapa-kevitra ny hampitovy ny VAT amin'ny e-book sy ny boky amin'ny endrika taratasy.
Amin'izao fotoana izao dia firenena vitsy no nanapa-kevitra ny hiroso amin'ny alàlan'ny fampitoviana ny VAT amin'ny boky, na inona na inona endrika misy azy, fa indray mandeha kosa i Espana no nitarika ny zavatra iray, nanao ny fanambarana tamin'ny tanan'i Luis de Cherries. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava isika hoe avy aiza ny fahasamihafana misy eo amin'ny hetra amin'ny boky sy ny fiantraikany amintsika fa hanana eofy 4% ny eBook manomboka izao.
1 Tsy fitoviana sarotra takarina
2 Inona no ateraky ny fihenan'ny VAT amin'ny eBooks?
3 Hevitra malalaka
Tsy fitoviana sarotra takarina
Nandritra ny fotoana lava be izahay dia niresaka momba ny tsy fitoviana nisy teo amin'ny haba izay nampiharina tamin'ireo karazana boky, nefa tsy nahazo ny fanapahan-kevitry ny Vaomiera eropeana. Ny firenena sasany toa an'i Frantsa na i Luxembourg dia sahy nanohitra ny iray amin'ireo vondrona ambony indrindra ao amin'ny Vondrona eropeana, nampidina ny VAT amin'ny e-book, taty aoriana dia mila manitsy amin'ny alàlan'ny didim-pitsarana mivantana an'ny Fitsarana misahana ny fitsarana ao amin'ny Vondrona eropeana.
Saingy, niova hevitra ny Vaomiera Eoropeana ankehitriny, ary nanokatra varavarana ho an'ireo firenena ao amin'ny Vondrona mba hampihatra ny VAT tadiavin'izy ireo amin'ny eBooks, saingy ao anatin'ny fetra azo takarina.
"Na taratasy na nomerika, ny boky dia boky ary ny gazety dia mbola gazety"
Ireo teny ireo dia mitondra ny sonian'ny Pierre Moscovici, Kaomisera misahana ny toe-karena ao amin'ny Vaomiera eropeana ary mandra-pahatongan'ny fotoana fohy lasa izay dia samy hafa be izy ireo, ary nitaona anay hino izy ireo fa tsy mitovy ny boky, satria ara-nofo na niomerika.
Inona no ateraky ny fihenan'ny VAT amin'ny eBooks?
Araka ny efa nohazavainay, ny firenena tsirairay avy amin'ny Vondrona eropeana dia hanana fahefana hametraka ny VAT izay ametrahana azy amin'ny boky nomerika. Any Espana, ohatra, dia efa nambara tamin'ny fomba ofisialy fa ny hetra amin'ny boky nomerika dia hampitahaina amin'ny an'ny boky.
Indrisy Amin'izao fotoana izao dia tsy voalaza mazava hoe rahoviana izany no hitranga, na dia nianatra fisaorana an'i Luis de Guindos aza izahay fa ho fepetra fampiharana mivantana fa tsy miadana., izay ho antsika mpamaky amin'ny endrika nomerika dia vaovao tsara. Raha eritreretina dia tokony hieritreritra isika fa hanan-kery amin'ny taona vaovao io fepetra io, na dia eritreretina aza fa mila fanovana vitsivitsy amin'ny lalàna ankehitriny, ary angamba mety hihena elaela kokoa ny fihenan'ny VAT amin'ny boky nomerika .
Mikasika izay mety hitranga manomboka izao dia misy fisalasalana ihany, na dia toa mazava aza fa ho hitantsika ny fihenan'ny vidin'ny boky nomerika, amin'ny tranga sasany. Raha mijery ny vidiny mahazatra ananan'ireo ebooks any Amazon isika, dia afaka manatsoaka hevitra fa matetika dia manana vidiny eo anelanelan'ny 9 sy 12 euro izy ireo. Raha nampiharintsika tamin'ny vidiny mivantana ny fihenan'ny 17% amin'ny VAT, dia teo anelanelan'ny 7.5 sy 10 euro ny vidiny.
ihany koa ireo boky niomerika izay maro an'isa ao Amazon (hatramin'ny 50%) dia manana vidiny 4.99 euro izay raha ampidinina ny VAT dia avela ho 4 euro ny vidiny. Mazava ho azy, tsy maintsy jerentsika izay napetraky ny mpanonta sy ny mpanonta boky, ankehitriny rehefa mihena ny VAT dia afaka manangona ny tombom-barotra mora foana izy ireo.
Mazava ho azy, io fihenan'ny VAT ho an'ny ebooks io dia hisy fiantraikany amin'ny boky nomerika amidy eny an-tsena mitovy, tsy misy ankilabao, ary afaka misafidy boky na endrika ara-batana na boky nomerika ambanin'ireo fepetra mitovy, farafaharatsiny rehefa miresaka hetra.
Taona maro no tsy maintsy nandalo, tsy maintsy nandoa VAT hafa rehefa mividy boky amin'ny taratasy na endrika nomerika, saingy toa nifarana ity hadalana ity izay naneso antsika matetika tamin'ny fotoana maro. Mila milaza aho fa faly tokoa ianao, na dia mbola tsy mikarakara zavatra sasany aza.
Tsoriko fa mbola tsy azoko hoe nahoana no ela be vao nanitsy ny toerana voalohany ny vaomiera eropeana, izay tsy nisy nahalala afa-tsy izy ireo, ary koa ny governemanta sasany, izay anisany ny Espaniola, mba haneho ny tsy fitiavany an'io toerana io. Ny fanovana ny toeran'ny Kaomisiona, tsy fantatsika tsara ny antony nitrangan'izany, ary farafaharatsiny tiako ho fantatra ny antony nitrangan'izany ary rehefa manomboka na mametraka ny tenanao ao anaty hadalana ianao dia tsy ratsy ny fantaro ny fomba nitrangan'izany. avy any.
Ary farany, tsy maintsy ho hitantsika izao ny fiatraikan'ny fihenan'ny VAT ho an'ireo boky nomerika, izay efa nohazavainay fa hitarika fidinan'ny vidiny, izay farafaharatsiny tsy haiko loatra ary ireo mpitory maro no hahita ny lafatra. fahafaha-mitazona ny vidin'ny eBooks anao ary amin'izany mampitombo ny tombom-barotrao.
Mihevitra ve ianao fa ny fihenan'ny VAT an'ny ebook hatramin'ny 4% dia ho vokatr'izany ny fihenan'ny vidiny?. Lazao anay ny hevitrao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity fidirana ity, amin'ny forum na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Software » eBooks » Ny EBooks dia handoa ny VAT mitovy any Espana amin'ireo boky amin'ny endrika taratasy
espaniola be dia be dia hoy izy:
Espaniola espaniola aho !!! (vakio mihira miaraka amin'ny mozika hira fiderana baolina kitra)
Mamaly an'i muchoespaniol
Ireo no boky dimy ankafizin'i Bill Gates novakiany nandritra ity 2016 ity
Azonao atao izao ny mividy Kindle PaperWhite amin'ny katalaogin'ny Orange